Ikhonkco leJaji, uLawulo lweSiza kunye neNyaniso
NgoLwesibini, Juni 29, 2010 Douglas Karr
Iinkampani ezininzi ndisebenza ngokugxila kakhulu kwixesha labo kwiphepha labo lasekhaya, ukukhangela, kunye namaphepha alandelayo. Uninzi lwazo ludumbile, kunye nokuthengisa okungafunekiyo kunye namaphepha angafundwa mntu-ukanti bayaqinisekisa ukuba baphaya. Abaqulunqi kunye neearhente bahlala phantsi baphuhlise indawo kunye nolawulo oluphezulu engqondweni olujongeka njengoku:
Banethemba lokuba 'ikhonkco lejusi' lihamba ngokufanelekileyo ukusuka kwelona phepha libalulekileyo kulawulo oluphezulu ukuya kwelona libalulekileyo. Ayisiyondlela ehlala isenzeka, nangona kunjalo.
Njengoko uGoogle efumanisa indawo yakho kwaye amakhonkco afunyanwa ekhomba umxholo wakho, uGoogle uqala ukukhulisa ukutolikwa kwawo kolawulo lwabaphathi besiza sakho.
Unokuba nesithuba esinye esilungiselelwe kakuhle amagama athile, kwaye unetoni yokuqhagamshela kuyo, eneneni uqhuba ukubaluleka kwamaphepha kwindawo yakho ngokubuyela umva kuGoogle. "Ikhonkco lejusi" linokuhamba ukusuka kwiposti yebhlog ukuya kudidi, ukusuka kudidi ukuya kwiphepha lasekhaya kunokuba kungenjalo.
Ewe kunjalo, enyanisweni, akukho bume bolawulo lubaluleke kakhulu njengendlela esetyenziswa lundwendwe lwakho lwewebhu.
Iphepha ngalinye ngalinye likhasi lasekhaya kwaye kufuneka ubakhuthaze kwaye ulungiselele ukuba baya kuba liphepha lokungena kwindawo yakho kwaye unendlela efanelekileyo yokuzibandakanya-nokuba kungokufowunelwa okanye ngokuphuhlisa iifowuni zokuthatha amanyathelo kumhlaba wokufika .
Kunzima ukukuqonda oko kuba nina cinga ukuba uyile uluhlu oluphezulu olubalulekileyo kwaye olujolise kwingqwalaselo apho ungathanda ukuba ibekhona, oko akuthethi ukuba yindawo yakho apho ifunyenwe kwaye isetyenziswe khona! Uyilo ngokufanelekileyo!
tags: idatha ye-b2bCokeTechnologyI-vTigerUshicilelo loluntu lwasezoominfo
Ulawulo loMsebenzi lulula ngeHiTask